Sihambise iiMikhosi ... Ungafuna Nawe | Martech Zone
NgeCawa, nge-31 kaJanuwari 2016 NgoLwesine, Meyi 19, 2016 Douglas Karr
Ndiyakunyaniseka ukuba ndididekile ngoku. Nini ukuphathwa kweWindowsPress ndafika emarikeni kwaye abanye babahlobo bam basungula inkampani yabo, ngekhe ndonwabe ngakumbi. Njengearhente, bendidiniwe kukusebenza emva komcimbi kunye nababuki bewebhu abaya kuthi basuse nayiphi na ingxaki ngeWordPress kuthi. Ngokusingathwa kweWordPress, umphathi wethu waxhasa iWindowsPress, wayilungiselela isantya, kwaye wayenempawu ezithile zokulawula zonke iisayithi zethu kunye nabo bonke abathengi bethu.
Sikhawuleze satyikitya njengamalungu kwaye iinkampani ezingamakhulu sayina, zisinika ingeniso elungileyo yokubambisana. Intloko yethu njenge-arhente ihambile-ekugqibeleni saba nenkxaso ye-24/7 kubaxumi bethu kunye nokusingathwa okuhle ngazo zonke iintsimbi kunye neempempe. Oko bekude kwinyanga okanye edlulileyo. Umbuki zindwendwe wethu wabanjwa kwiseti yeeseva kwiziko ledatha elaliphantsi kokumangalisa uthotho lokuhlaselwa kweDDoS. Iziza zethu kunye nazo zonke iisayithi zabaxumi bethu beziphezulu kwaye zisihla yonke imizuzu okanye njalo, kubonakala ngathi, akukho siphelo kwindawo.
Besibambekile kodwa bendiqala ukucaphuka kukusilela konxibelelwano. Abathengi bethu bebesiphethe kakubi, kwaye besingenakubaxelela nantoni na kuba ukusingathwa kwethu bekungasixeleli nto. Ekugqibeleni ndaye ndathetha nomnye wabanini ngaphakathi kwiqela le-WordPress eliqeqeshiweyo ku-Facebook kwaye wathi banazo zonke izandla kumgangatho kwaye basebenzela ukufumana abathengi abachaphazelekayo kwiiseva ekujoliswe kuzo. Wowu… bekumnandi ukuva kwaye ndambulela ngomsebenzi wakhe kwaye ndijonge phambili ekufudukeni.
Oko kukuthi, de sathutha.
Yakuba indawo yethu ihanjisiwe, yarhubuluza yema. Ndinengxaki yokungena, ukulayisha, okanye ukwenza into entle ngesiza. Iindwendwe zam zakhalaza kwaye zirhubuluza zisuka kumntu wesithathu zabonisa indawo kwindawo yokuma kufutshane. I-Google Search Console ibonise ingxaki ecace gca:
Ndilayishe lo mfanekiso kwaye ndacela inkxaso ukuba ijonge kwiseva yam ngemicimbi, ndibazise ukuba ndisandula ukufuduka. Kwaye ke umdlalo wokusola waqala.
Andiyenzi le nto… bandigqithisile ukusuka kubuchwephesha ukuya kubuchwephesha oqhubeka nokubeka iphiko lakhe ukuzama ukufumana iingxaki kwindawo yam. Abazami nokufumanisa ukuba ngaba ziziseko zophuhliso. Ke, ndenze nantoni na enokuyenza. Ndiyekile ukushicilela ndalungisa yonke ingxaki njengoko bebakhombisile… kwaye ukusebenza kwesiza akuzange kutshintshe. Mhlawumbi bade bafunda nenqaku lam izinto ezichaphazela isantya sendawo yakho.
Nantsi into abandithathe ngayo:
A Impazamo ye-PHP ngeplagi ethile xa isenza ifayile ye- API umnxeba. Ndiyikhubazile iplagi, akukho tshintsho kwisantya sendawo.
Isicelo esilandelayo sasindibuza ukuba ndabona phi ukuba isiza sicotha. Ke ndibakhombe kwi Idatha yokukhasa kukaGoogle kwaye bathi ayiloncedo. Hayi duh… ndiyaqala ukuba nomsindo kancinci.
Emva koko bathi andinasiqinisekiso se-SSL kwifayile yam Inethiwekhi yokuThumela. Lo yayingumcimbi omtsha, andizange ndiqonde ukuba i-CDN yayikhubazekile (ngaphambi nasemva kokufuduka). Ke ndifake ifayile ye- Isitifiketi seS SSL kwaye bayenza yakwazi. Akukho tshintsho kwisantya sendawo.
Bacebise ukuba ndidibanise Izicelo zeJS kunye neCSS. Kwakhona, olu yayilulungelelwaniso olufanayo ngaphambi kokufuduka kodwa ndathi kulungile kwaye ndafaka JS kunye ne-CSS optimizer plugin. Akukho tshintsho kwisantya sendawo.
Bathi ndifanele compress imifanekiso. Kodwa, ewe, abakhange bazikhathaze ngokubona ukuba sele ndikho ukucinezela imifanekiso.
Emva koko ndafumana umyalezo wokuba bavavanya indawo yam kuzo zombini iiserver kwaye bekunjalo ngenxa yam. Ukuchaneka, "Ngolu lwazi, siyakwazi ukubona ukuba ayisiyo iseva okanye umthwalo womncedisi obangela ixesha lomthwalo wesiza." Ke ngoku ndilixoki kwaye yingxaki yam… Ndikhumbula ezi ntsuku phambi kokuba ndisebenze nenkampani ebekufanele ukuba ziingcali kwiWordPress.
Ndabacela ukuba bandixelele ukuba mandizame ntoni ngokulandelayo. Bacebisa mna qasha umphuhlisi (Andihleki), oko kungasebenza kumxholo, iplagi, kunye nogcino lwedatha. Ke, iingcali zeWordPress kulo msingathi azinako ukundixelela into engalunganga, kodwa zifuna ukuba ndiqeshe oovimba nangona ndibhatala ama-2 ukuya kuma-3 amaxesha okuhlawulwa yinkampani.
Indawo yayiqhubeka iba mandundu, ngoku ivelisa Iimpazamo ezingama-500 xa ndizama ukwenza izinto ezilula ngaphakathi kolawulo lweWordPress. Ndixela iimpazamo ezingama-500. Into elandelayo endiyaziyo, indawo yam ihambile, ithathelwe indawo ngumxholo ocacileyo nazo zonke iiplagi zikhubazekile. Ngoku ndiqala ukusebenzisa ZONKE i-CAPS kunye neempawu zesikhuzo kwiimpendulo zam. Indawo yam ayisiyonto uyithandayo, lishishini… ke ukuyisusa yayingelilo ukhetho.
Okokugqibela, ndifumana umnxeba ovela kwinkampani yokubamba kwaye sincokola ixesha elide malunga nemicimbi. Apha kulapho ndiqhuma khona ... uyayivuma loo nto abathengi abaninzi bebenemicimbi yokusebenza okoko ukufuduka kwabo kude ne-DDoS yahlasela iiseva. Ngokwenene? Bendingayi kuqikelela.
Buyela ekusombululeni… ndixelelwe ukuba ndingafuna ukuzama ukuya kwi ngokukhawuleza DNS. Omnye umjovo ebumnyameni kuba sele ndibanjelwe ngombane ngokukhawuleza umboneleli olawulwayo we-DNS.
Ilaphu elipheleleyo… sibuyele ku ukubeka iiplagi. Iiplagi ezifanayo ezazisebenza ngaphambi kokufuduka. Okwangoku ndenze kakuhle kakhulu. Ndibeka ezinye izicelo kwabanye Iingcali ze-WordPress zaza zandikhomba Flywheel.
Ndidibanisa ne Flywheel Ndibhalisele i iakhawunti yovavanyo yasimahla, ndifudusele indawo kum, kwaye inyukile kwaye isebenza ngesantya esivuthayo. Kwaye, okunye ukudana, kuyayenza iqhezu leendleko zento endandiyihlawula nomamkeli wethu wakudala.
Kutheni Ndagqiba kwelokuba Ndifuduke?
Ukufudusa zonke iisayithi zethu akuyi kuba mnandi. Khange ndenze sigqibo ngenxa yemicimbi yokusebenza, ndiyenze ngenxa yemicimbi yokuthembana. Inkampani yam yokugqibela eyandibambeleyo yandilahlekisa kuba babengenayo ingqibelelo (kwaye basaswele ingqibelelo) yokuvuma ukuba banemicimbi ephambili yokusebenza. Ngendibanyamezele ukuba bandixelele inyani kwaye ndibanike nolindelo lokuba bazakulungiswa nini, kodwa andinakubanyamezela ngokukhomba nje iminwe.
Nantsi ingxelo yeWebmaster kwiintsuku ezimbalwa kamva:
Usenokuzibuza ukuba kwenzeka ntoni xa Flywheel iba nkulu… ingaba izakubangela amava afanayo? Enye yezinto endizifumeneyo kolu fuduko kukuba umamkeli wethu wakudala wayengenazinto zokwenza iakhawunti enye ngaphezulu kwenye. Ngenxa yoko, ingxaki isenokungabi lolufakelo lwam konke konke, inokuba ingomnye umntu oxhoma izixhobo kwiseva ezisa nathi sonke ezantsi.
Nendawo ekhuselekileyo ivuliwe Flywheel, sifaka izatifikethi zethu zokhuseleko kwaye sibuyisela irhamncwa ebomini. Ndiyaxolisa ngokungabikho komxholo kule veki iphelileyo. Unokubheja ukuba siza kulungiselela ixesha elilahlekileyo!
Ukubhengezwa: Ngoku sililungu leFlywheel! Kwaye Flywheel ibi kucetyiswa yiWordPress!
tags: iimpukaneukusingathwa kwe-WordPressWordPressyokupasa amagamawpengine
Imilinganiselo emi-3 yeSicwangciso esiliQili seNtengiso ye-imeyile
Ndivakalelwa kukuba bendinemicimbi efanayo nakwenye indawo yam yenginginya. Ukuzibuza ukuba ngaba baphambuka kwi-WordPress yabo yokusingathwa kwiiseva ezifanayo ezazifumana uhlaselo lwe-DDoS? Ukukhutshwa ngokufanayo kunye nokusola umdlalo de ekugqibeleni babe netekhnoloji ethe bayifumene imicimbi yeseva yangaphakathi ababesebenza kuyo. Ungakholelwa ukuba ndinengxaki ukusukela ngoko ngethamsanqa.
Ndicinga ukuba ibango liphezulu kula maqonga alawulwayo. Ngelishwa, njengokuba mna nawe sisazi… baninzi kakhulu abantu phaya "abacinga ukuba bayazi" xa kuthelekiswa nokwazi okwenzekayo ngala maqonga. Ndiyakholelwa ukuba baya kubamba kwaye basebenzise iinkqubo zokubeka esweni eziya kuthi zikwazi ukulandelela imiba. Ngokunyaniseka, esi siganeko sivele ngokungathi baphosa imijukujelwa eludongeni. Ndaphelelwa kukuzithemba.
Ndiyayiva intlungu yakho. Akukho nto imbi ngaphezu kokuhamba kwisikhokelo sokusombulula ingxaki esingenamsebenzi xa sele uyazi ukuba ayizukunceda.
Ngaba lo ngomnye umkhosi apho kubanjwa khona i-IonThree? Kwaye ngaba kufuneka siqwalasele ukufuduka? Ndicinga ukuba sihlaziyiwe nje.
Kananjalo bendiya kulindela ukuba uyibize ngegama igama lenkampani kuba unabathengi ababanjiweyo kubo kwaye, njengam, banokuzibuza ukuba banemicimbi abangayazi ngayo okwangoku. Ngaphandle kokuba ucwangcisa umyalezo wabucala kubaxhasi abachaphazelekayo malunga nawo.
Ndichonge umba ndisebenzisa i-Google Webmasters kwaye ndikhangele kwizibalo zethu zokukhasa, iTolga. Andikholelwa ukuba bonke abathengi babo, ndicinga nje ukuba sixhonywe kwezinye iiseva ezicothayo ezinomthwalo omninzi kuzo. Ukuba awuboni ukwehla kokusebenza, mhlawumbi akukho sizathu sokushiya. I-Flywheel ayibizi kakhulu kukhetho lwethu lweeakhawunti ezininzi, ungaqinisekanga kodwa ungagcina iirandi ezimbalwa.
Umlandeli omkhulu kaFlywheel, uDoug. Usebenzise ngaphezulu konyaka.
Andikholelwa ukuba isiza sihambe kancinci kangakanani, kwaye abanakho ukukunika impendulo echanekileyo. Ndiyavuya ukuva izinto zisebenza kakuhle neFlywheel. Kutshanje sitshintshe ukubamba indawo yeRoundpeg, kwaye sinendawo ezinzileyo kwindawo yethu.
Mar 23, 2017 ngo-1: 30 AM
Ndizabalaza ngenene neenkampani eziphosa phantsi kwebhasi kwezi zithuba zikawonkewonke. Yonke inkampani inabantu abalungileyo kwaye ithemba lam kukuba ndibabambe nje ngenyanga embi.
Mar 24, 2017 ngo 2:52 PM
Kudala ndicinga ngakumbi ngale nto, kwaye uyazi ntoni? Ulungile. Nceda ususe uluvo lwam. Ngaphandle kweengxaki esinazo kwi-W / Flywheel, nkqu nangeyona mini yabo imbi, basabetha iinginginya ezinjenge-HostGator, GoDaddy, njl.